▷ Ny gorodona dia famakafakana fifaninanana lava any Fortnite
Ny fampahalalana rehetra momba ny lalao Video sy eSports for finday finday.
GOLUEGO - Ny fampahalalana rehetra momba ny Lalao Video sy eSports ho an'ny Fitaovana finday.
Ny fanadihadiana ny gorodona dia fifaninanana lava any Fortnite
Last nohavaozina Mar 1, 2021
Mba hahazoana ilay hoditra TheGrefG Fortnite Icon Series vaovao, ny mpilalao dia mila mifaninana amin'ny fifaninanana The Floor dia Lava ho avy ao Fornite ihany.
Izy io dia fiolanana tokana amin'ny maody Fortnite Battle Royale nentim-paharazana izay manohitra ny mpilalao hijanona tsy ho amin'ny tany araka izay tratra.
Ity fifaninanana Fortnite ity dia miasa sahala amin'ny fomba fiasa Fortnite Battle Royale. Nomena ny isa ho an'ny fanesorana sy ny fametrahana azy, ary andiana heats misesy no ampiasaina hanampiana ireo mpilalao milahatra.
Ny maha samy hafa azy dia, mandritra ity lalao lalao ity, ny lava dia hitsangana miadana mandritra ny lalao ary ny mpilalao dia hamokatra fitaovana fananganana tsy tapaka hanaraka ny fiakaran'ny lava.
Ny Floor dia Lava amin'ny fihenan'ny isa amin'ny fifaninanana Fortnite
Ity fifaninanana Fortnite ity dia manome loka an'ireo mpilalao isa telo manaitra ny fanafoanana sy isa 60 ho an'ny fandresena azon'ny mpanjaka.
Mety hihevitra izany fa raha mitombo tsy mitsaha-mitombo ny mpilalao ary miteraka fananganana fitaovana amin'ny fotoana rehetra ny mpilalao dia maro no mety manandrana manangana fotsiny ary manantena fa ny lava dia haka mpilalao ho azy ireo.
Amin'ity fizarana teboka ity, ny famonoana olona 10 mpamono olona dia miteraka isa mitovy amin'ny laharana 20 voalohany, ary famonoana olona 20 no hametraka azy ireo ambonin'izay nandresy nefa tsy nisy namono.
Amin'ny ankapobeny dia mbola voalanjalanja ihany izany ary mbola zava-dehibe ny fametrahana azy, saingy ny mpilalao dia tsy tokony hanantena ny hanao tsara amin'ny fifaninanana amin'ny filalaovana defensive loatra.
Inona no hatao amin'ireo fitaovana fananganana tsy manam-petra
Hafa tanteraka ny fananganana mandritra ity fifaninanana ity, satria tsy maintsy manangana ny mpilalao mba ho tafavoaka velona. Na dia novokarina nandalo aza ny fitaovam-pananganana dia tsy maintsy mitandrina ny mpilalao amin'ny fampiasana ireo fitaovana mety amin'ny toe-javatra mety.
Ny mpilalao dia miteraka hazo haingana kokoa ary miadana kokoa ny vy, koa amin'ny ankapobeny dia te hampiasa hazo izy ireo amin'ny fivezivezena sy biriky ary vy mba hanoherana ny afon'ny fahavalo.
Ny zavatra iray tokony hotandremana amin'ity fifaninanana ity dia ny fananganana avo kokoa dia afaka manome tombony lehibe ny mpilalao ary mampiseho azy ireo amin'ny lafiny fanafihana vaovao. Paikady iraisana hampiasain'ny mpilalao amin'ity fifaninanana Fortnite ity ny hanafika ny tranon'ny mpilalao hafa amin'ny fanantenana manipy azy ireo amin'ny lava.
Ny fahazoana tombony amin'ny haavony dia hanampy amin'ny fitifirana mpilalao ambany kokoa, saingy hanasarotra kokoa ny fivezivezena satria mety ho voaroaka hatrany ireo singa fototra. Ny mpilalao dia mila mandanjalanja ny fananganana ary manana drafitra raha toa ka simba ny rafitr'izy ireo.
Ny mpilalao dia hiady amin'ny lavitra eny amin'ny The Floor dia Lava ao Fortnite
Ary farany, mandritra ity fifaninanana Fortnite ity, ny mpilalao dia te-hahazo antoka fa haka fitaovam-piadiana lavitra sy ammo be dia be. Ny lava dia hanasarotra ny famindra, ka hahatonga ny ankamaroan'ny mpilalao hiady lavitra.
Na dia mety hanampy aza ny mahafantatra ny fomba fananganana ho an'ny mpanohitra, amin'ny ankamaroan'ny fotoana mahery setra, dia tsara kokoa ny manandrana mitifitra azy ireo raha mitazona rafitra fiarovana.
Mbola mety ilaina ihany ny basy, fa ny sniper sy AR kosa dia hiafara amin'ny fanaovana ny ankamaroan'ny asa mandritra ity fifaninanana Fortnite ity.
Mirary soa, mpifaninana!
Share FacebookTwitterRedditWhatsAppPinterestkarazana verinia
Free Fire Tompondakan'i India 2021: Andro valiny 6
Anaram-pianakaviana ao Fortnite
Mety tianao ihany koa More from the author
Ny Fortnite no lalao tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao? Eto ny valiny
Maninona Fortnite ...
Maninona Fortnite no minono
Fa maninona no fatiantoka Fortnite
Prev Manaraka 1 amin'ny 65
Facebook Araho izahay
Twitter Araho izahay
Youtube Raiso amin ny
Instagram Araho izahay
© 2021 - GOLUEGO. Zo rehetra voatokana.
Te handray anjara amin'ny Draws-nao izahay mba HANDRESY VOLA azo vidiana amin'ny lalao video tianao indrindra?
Mampiasa cookies ity tranonkala ity raha te hanana traikefa tsara kokoa. manaikyHamaky bebe kokoa